ငါ့ကိုမကြည့်ပါနဲ့။ သဘောတူသဘောတူထားသည့်သို့မဟုတ်သဘောတူလက်ခံမှုမရှိသောဖြန့်ဝေမှုသည် Sexting Images (2019) ၏အမြင်နှင့်အကဲဖြတ်မှုကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ငါ့ကိုကြည့်ပါ (မလို) ပါ မည်သို့ယူဆသဘောတူညီမှုသို့မဟုတ် Non-သဘောတူညီမှုဖြန့်ဖြူးအမြင်နှင့် sexting ပုံများ၏အကဲဖြတ် (2019) ထင်သလောက်
comments: သူတို့ကဓါတ်ပုံတွေကို Non-ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းယူဆသည့်အခါလူတို့ sexting ပုံရိပ်တွေမှာရှာဖွေနေအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်:
ကြည့်ရှုအပြုအမူနှင့် sexting ပုံရိပ်တွေ၏အကဲဖြတ်ဖြန့်ဖြူးများ၏ယူဆလမ်းကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်သောဤလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုပြသ။ ပုံမဟုတ်သောဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းယူဆသူကို objectification သီအိုရီယောက်ျားနှင့်အညီခုနှစ်တွင်ပုံဖော်လူတစ်ဦး၏ကိုယ်မှာရှာဖွေနေအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဤသည်ဒါခေါ် '' objectifying ကြည့် '' အခြားသူတွေ objectify မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ယေဘုယျသဘောထားတွေအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီလကျခံဖို့ပိုမိုမြင့်မားလိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက်အစကပိုသိသာခဲ့ပါတယ်။
ဂျေ Clin ။ Med ။ 2019, 8(5), 706; https://doi.org/10.3390/jcm8050706
by အန်းနာ Dekker 1, * †, Frederik Wenzlaff 1, †, အန်း Daubmann 2, ပညာရှင် Hans O. Pinnschmidt2နှင့် Briken Peer 1
1လိင်သုတေသနနှင့်ဥပဒေရေးရာစိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက်အင်စတီကျု, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, 20246 ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ
2ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Biometry နှင့်ကူးစက်ရောဂါ၏ Institute မှ, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, 20246 ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ
ရငျးနှီးသညျ့ပုံ၏ non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှု privacy ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏လက်ျာ၏လေးနက်သောဖောက်ဖျက်မှုဖြစ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသုတေသန Non-ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီ shared ခဲ့ကြကြောင်းရင်းနှီးဓါတ်ပုံတွေကိုစားသုံးများအတွက်အကြောင်းပြချက်အပေါ်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုက sexting ပုံရိပ်တွေ၏ထင်ကြည်ကြည်သို့မဟုတ် Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးသောဤပုံရိပ်တွေ၏အမြင်နှင့်အကဲဖြတ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုကျပန်းအုပ်စုနှစ်စု၏တဦးတည်းမှတာဝန်ကျတယ်။ အလားတူရင်းနှီးပုံရိပ်တွေအားလုံးသင်တန်းသားများကိုပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော်တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုကအခြားအုပ်စုတစ်စုဓါတ်ပုံများ Non-ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်သော်လည်းယင်းဓာတ်ပုံများ, ဆန္ဒအလျောက် shared ခဲ့ကြသည်ယူဆ။ သင်တန်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သောပုံဖျောထားသူတစ်ဦး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု rating အဖြစ်အများအပြားတာဝန်များကိုပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်, သူတို့ရဲ့မျက်စိ-လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံခံရခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုအပြုအမူနှင့် sexting ပုံရိပ်တွေ၏အကဲဖြတ်ဖြန့်ဖြူးများ၏ယူဆလမ်းကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်သောဤလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုပြသ။ ပုံမဟုတ်သောဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းယူဆသူကို objectification သီအိုရီယောက်ျားနှင့်အညီခုနှစ်တွင်ပုံဖော်လူတစ်ဦး၏ကိုယ်မှာရှာဖွေနေအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဤသည်ဒါခေါ် '' objectifying ကြည့် '' အခြားသူတွေ objectify မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ယေဘုယျသဘောထားတွေအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီလကျခံဖို့ပိုမိုမြင့်မားလိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက်အစကပိုသိသာခဲ့ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့အဲဒီရလဒ်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးရေးလှုပ်ရှားမှုများ '' sexting abstinence '' မြှင့်တင်ရန်နှင့်အရှင်ပုံဖော်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အားဤသို့သောရုပ်ပုံများကို non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးဘို့တာဝန် attributing ကြောင်းအကြံပြုမလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအစား, ကအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းအထီးစားသုံးသူအကြား, sexting ပုံရိပ်တွေ၏ non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးများ၏ illegitimacy အလေးပေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။
keywords: မျက်စိခြေရာခံခြင်း, Non-ကြည်ကြည် image ကိုဝေမျှခြင်း, ရငျးနှီးပုံရိပ်တွေ; objectification; objectifying ကြည့်; မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှု; sexting
sexting, အရငျးနှီးသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, သို့မဟုတ်စာသားများ၏ပေးပို့ခြင်း , [ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွင်းဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပြီ2,3,4,5] ။ အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားနှင့်ကြည်ကြည်နဲ့ Non-ကြည်ကြည် sexting ၏ရှုပ်ထွေးမှုများဗဟိုအယူအဆရေးရာပြဿနာဖြစ်ထေူ၏။ [6,7] ။ ကြည်ကြည် sexting ဟာ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ကြွစွာနှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပုံများပေးပို့ခြင်းမကြာခဏပျြောမှေ့စရည်ညွှန်းနေစဉ်, sexting ပုံရိပ်တွေ၏ non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှု [အလိုတော်ဆန့်ကျင်သို့မဟုတ်ပုံဖော်လူတစ်ဦး၏ပညာအတတ်မရှိဘဲဖြစ်ပျက်8] ။ ဤသည် Non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှု [အများဆုံးမကြာခဏ sexting များ၏အခြေအနေတွင်အန္တရာယ်များကိုဆှေးနှေးခဲ့တစျဦးဖွစျသညျ9,10,11,12,13,14,15,16,17,18] ။ sexting ပုံရိပ်တွေ (မိတ်ဆွေကသူတို့ရဲ့စက်ဝိုင်းထဲမှာဥပမာ) ပုံဖော်လူတစ်ဦး၏အလိုတော်ဆန့်ကျင်ပေးပို့သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာထုတ်ဝေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးရန်အလေးအနက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သားကောင်များအများပြည်သူအရှက်နှင့်အွန်လိုင်းနိုင်ကျင့်ထိတွေ့နေကြရသောအခြေအနေများ [အချို့ကိစ္စများတွင်သင်္ချိုင်းတွင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များပင်သတ်သေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်3,7].
အများပြည်သူစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ဒါပေမယ့်လည်း '' sexting abstinence '' ကင်ပိန်း [ထဲမှာမသာ19] sexting, ယေဘုယျအားဖြင့် [အန္တရာယ်များသည်ဟုယူဆရသည်20] ။ ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ပုံဖော်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မရည်ရွယ်သောဖြန့်ဝေ [တာဝန်ရှိသည်ကျင်းပကြသည်ဆိုပါကကြည်ကြည်နဲ့ Non-ကြည်ကြည် sexting အကြားကွာခြားမဟုတ်အပြစ်တင်သားကောင်ဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်7] ။ ဤသည်ယန္တရား [ 'မုဒိမ်းကျင့်ယဉ်ကျေးမှု' '၏သီအိုရီအခြေအနေတွင်ဝေဖန်ထားသည်21,22,23] နှငျ့ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification '' ၏ကျယ်ပြန့်သဘောတရားများကိုချိတ်ဆက် [24,25,26,27] နှငျ့ '' မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှု '[26,28,29] ။ Objectification သီအိုရီ [အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အမျိုးသမီးများလိင်, objectified နေကြသည်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ကုသနှင့်သာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုအခြားသူများမှပျော်မွေ့ပေးသောအတိုင်းအတာအထိခံထိုက်စဉ်းစားကြသည် postulates29] (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် [28,30]) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များထံမှထိုကဲ့သို့သောကြည့် objectifying အဖြစ်သိမ်မွေ့အပြုအမူအထိတစ်ဦးစဉ်ဆက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည် [30,31] ။ အမြင်အာရုံ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးအဖြစ် conceptualized ဤအကြည့်, မျက်မြင်လက်တွေ့ [မျက်စိ-tracking နည်းပညာကို အသုံးပြု. သရုပ်ပြခဲ့ကြ32] ။ ထို့အပြင်လိင်အခြားသူတွေ objectify သူတွေကို [မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီကိုလက်ခံရန် ပို. ဖြစ်ပြခဲ့ကြ24,25], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုပုံမှန်မှအစေခံသောဥပမာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် (အပြစ်တင်ခံရသူမှတဆင့် [27,33]) ။ ဤရွေ့ကားသိမ်မွေ့ဒဏ္ဍာရီ [သိမြင်မှုအစီအစဉ်များအဖြစ် conceptualized ပြီ34] နှင့်မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့သရုပ်ပြ [35,36].
သုတေသန Non-ကြည်ကြည် sexting နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်န်းကျင်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ [7,9,20] နည်းနည်းအားထုတ်မှုထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေစားသုံးဘို့အကြောင်းပြချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်ကြည်ပစ္စည်းနှင့်အတူမျှသာနှိုင်းယှဉ်ပုံရိပ်အကြောင်းအရာအတွက်သိသာကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်ကြဘူးသည့်အခါကလူ Non-ကြည်ကြည် sexting ပစ္စည်းလောင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက်။ non-သဘောတူညီမှုသူ့ဟာသူအတွက်တိကျတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအနည်းဆုံးစားသုံးသူအချို့အဘို့, ရှိပါသလား? ဒီနောက်ခံဆန့်ကျင်, ငါတို့စမ်းသပ်မှုတွေအ (Non-ကြည်ကြည် vs. ကြည်ကြည်) ဖြန့်ဖြူးများ၏သညျဟုထငျလမ်းပုံရိပ်တွေ sexting ၏အမြင်သြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုအနာဂတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်ကတိပေးထားတယ်။
အဆိုပါ objectification သီအိုရီများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ပါမယ်ကြည်ကြည်သို့မဟုတ် Non-ကြည်ကြည် forwarding ကိုပေါ် မူတည်. ပုံရိပ်တွေ sexting ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အမြင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမျှော်လင့်။ ယခင်သုတေသနနှင့်အညီ, ငါတို့ [တိုးလာ objectification အဆိုပါ objectified လူတစ်ဦး၏မြင့်မားသောဆွဲဆောင်မှု ratings နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းငြင်းခုန်37] နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသိသာ objectifying ကြည့်  ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပါမယ် Non-ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီပေးပို့ပုံရိပ်တွေကိုပိုပြီးရင်းနှီးပြီးပိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏နောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟု hypothesize ။ အခြားအ objectification နှင့်အဆင့်မြင့်မုဒိမ်းမှု-ဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှုများအတွက်ယေဘုယျသဘောထားတွေလည်း objectification တိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
sexting အပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာပေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုမြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်လူ့အဖွဲ့အစည်းစိုးရိမ်မှုတွေကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အတွက် sexting အတွေ့အကြုံကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားထက်လူကြီးများအကြားသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ လက်ရှိစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် [3အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏လေ့လာချက်များ၏ခန့်မှန်းအတောအတွင်းပျံ့နှံ့ 10.2% နေစဉ်] လိင်ပေးသောကျမ်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများ်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏လေ့လာချက်များ၏ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက် (95% CI (1.77% (18.63% CI (53.31-95)) ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည် 49.57-57.07)) ။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်လေ့လာမှုအသုံးပြုသူလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးပုံရိပ်ကိုအာရုံစိုက်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ခံဆန့်ကျင်, စ, ငါတို့အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးနမူနာဆနျးစစျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ကျနော်တို့ပြယန္တရားများမြီးကောင်ပေါက်အတွက်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်းယူဆပေမယ့်ဒီအနာဂတ်သုတေသနများကသရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
2 ။ ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ
တစ်ဦးက 76 သင်တန်းသားများစုစုပေါင်း (57% အမျိုးသမီး, M ကအသက်အရွယ် = 31.99, SD ကအသက်အရွယ် = 10.28) တက္ကသိုလ်သတင်းလွှာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာတာဝန်များကိုနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်ပေမယ့်စမ်းသပ်မှုများအပြည့်အဝရည်ရွယ်ချက်ရင်တော့မှားမယ်ထားရှိမည်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုပါဝင်မှုကိုလေ့လာမှရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။ ဟမ်းဘတ်၏ psychotherapists ၏ပြည်နယ်အခန်းထဲက (Psychotherapeutenkammer ဟမ်းဘတ်) ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကလက်ရှိလေ့လာမှု (03 / 2015-PTK-နာရီ) ၏လေ့လာမှု protocol ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
2.2 ။ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ယန္တရား
စေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစာရေးသူမှလူသိများပေမယ့်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုမသိသော [14 Semi-ဝတ်လစ်စလစ် sexting ပုံရိပ်တွေပေးအပ်38] ။ ကျား, မတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးကအပိုဆောင်းပုံရိပ် 16 ဓာတ်ပုံများကို (50% အမျိုးသမီး) အစုတခုထဲမှာရရှိလာတဲ့, လူထုတင်ပြချက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များမှရရှိထားခဲ့ပါသည်။
stimulus တင်ဆက်မှုနှင့်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း SensoMotoric တူရိယာ (SMI GmbH, Teltow, ဂျာမနီ) software ကို ExperimentCenter သုံးပြီး 22 လက်မအရွယ်မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်မော်နီတာ (1680 × 1050 pixels) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြTM။ တစ်ဦးကဝေးလံခေါင်သီမျက်စိ tracker (SMI, အနီရောင်သည့်စနစ်) တစ်ဦးဦးခေါင်း-မေးစေ့ကြွင်းသောအရာကိုသုံးပြီး 120 ထံမှ 50 Hz မှာစင်တီမီတာကြည့်အကွာအဝေးမျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
2.3 ။ မေးခွန်း
တခြားသူတွေရဲ့တစ်ဦးချင်းစီ '' objectification ကိုယ်ပိုင် Objectification မေးခွန်းလွှာများပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ဂျာမန်ဘာသာပြန်ချက်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  အခြား objectification (အခြား Objectification စကေး, OOS [များအတွက်40]) ။ scale, ငါးအရည်အချင်းကို-based (ဆိုလိုသည်မှာခွန်အား) attributes ငါးပုံပန်းသဏ္ဌာန်-based (ဆိုလိုသည်မှာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု) များမှာ 10 ခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီ attribute ကိုရိပ်မိဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ဖို့တောင်းခဲ့ကြ (10 = "အရေးအပါဆုံး"; 1 = "အနည်းဆုံးအရေးကြီးသော") သီးခြားစီယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားရမှတ် objectification ၏အဆင့်မြင့်ညွှန်ပြပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ -25 ထံမှ 25 အထိ။
သင်တန်းသားများကိုထပ်မံ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်စကေး (AMMSA) အကြောင်းမော်ဒန်ဒဏ္ဍာရီများ၏ဂျာမန်လက်ခံတစ်ခု 11-item ကိုတိုတိုဗားရှင်းပြီးစီး41] ပြီးသားကိုအခြားမျက်စိခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှုများအတွက်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့ခဲ့သော [35,36] ။ တစ်ခုချင်းစီကို item (7 = "လုံးဝသဘောမတူ"; 1 = "လုံးဝသဘောတူ") တစ်ဦး 7-အမှတ်စကေးအပေါ် rated ခဲ့သည်။
2.4 ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုပုံရိပ်တွေ sexting ၏အကဲဖြတ်အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်မိတ်ဆက်စာသားကိုဖတ်ပါ။ အခြေအနေကိုပေါ် မူတည်. ရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူးဖြစ်စေအဆိုပါပုံဖော်လူတစ်ဦး (Non-ကြည်ကြည်ခွအေနအေ) ၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်, မိမိဆန္ဒအလျောက် (ကြည်ကြည်ခွအေနအေ) သို့မဟုတ်အဖြစ်မလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အဆိုပါကိုင်တွယ်ပုံသဏ်ဌာနျဖြန့်ဖြူးသည့်သရုပ်ဖော်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် evoked နိုငျခဲ့သုံးခံစားချက်များကိုဖော်ပြမှသင်တန်းသားများကိုတောငျးဆိုခွငျးအားဖွငျ့ကိုခိုင်ခံ့စေခဲ့သည်။ ပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုအတူပုံရိပ်တွေသုံးကြိမ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ရုပ်ပုံများ, ယောက်ျားကိုပုံရိပ်တွေနှင့်အတူစတင်လုပ်ကွက်အတွင်း randomized ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ပုံများ5ဒုတိယအဘို့အပြလက်ဝဲဘက်အပေါ်တစ်ဦးအနက်ရောင် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်ရှေ့ပြေး, 1 စက္ကန့်ဘို့အပြည့်အဝ screen ပေါ်မှာတစ်ဦးချင်းစီတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးတာဝန်လွတ်လပ်စွာပုံကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာသင်တန်းသားများကိုပုံဖော်လူတစ်ဦး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တတိယတာဝန်အဘို့, သင်တန်းသားများကိုသူတို့ပုံရိပ်ကိုအကြောင်းအရာစဉ်းစားနှင့်မည်သို့မနှစ်မြို့ဖွယ်နောက်ထပ်ရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူးသည့်သရုပ်ဖော်လူတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုရင်းနှီးအကဲဖြတ်ဖို့တောင်းခဲ့ကြ (= 1 ကနေအထိ "မမှာအားလုံး ... ";7= "အလွန် ... ") ။ အဆိုပါ sociodemographic အချက်အလက်များ၏ပြီးစီးလျက်, မေးခွန်းပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် debriefed ခဲ့ကြသည်။
2.5 ။ ဒေတာများလျှော့ချရေးနှင့်ဒေတာများအားသုံးသပ်ခြင်း
တူညီသောဘာသာရပ်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများအတွက်အကောင့်မှတစ်ဦးရောနှောမော်ဒယ်ချဉ်းကပ်အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ (အထီးပုံရိပ်တွေ vs. အမျိုးသမီး) image ကိုလိင်, ကျား, မ (အမျိုးသမီးတွေ vs. ယောက်ျား), (ကြည်ကြည် Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူး vs. ) သည်လွတ်လပ်သော variable တွေကိုအခွအေနေ၏ fixed သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်, သူတို့ရဲ့သုံးခြင်းနှင့် Two-လမ်း interaction ကနှင့် OOS ၏ ဂိုးသွင်းနှင့် (1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ ratings အပေါ် AMMSA ရမှတ် (2) ပုံရိပ်အကြောင်းအရာရငျးနှီး, နှင့် (3) ရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူး၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ရိပ်မိ၏။ ကျပန်းကြားဖြတ်ဖမ်းယူသင်တန်းသားများအဘို့အယူဆခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မဖြစ်စလောက်နည်းလမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏ 95% -confidence ကြားကာလသတင်းပို့ပါ။ ကျနော်တို့ Kleinbaum et al အဆိုအရ non-သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုနောက်ပြန်ဖျက်သိမ်းရေးပြီးနောက်နောက်ဆုံးမော်ဒယ်၏ရလဒ်များကိုသတင်းပို့ပါ။  ။ အားလုံးစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုနှစ်ခု-Tails (α = 0.05) တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမှီခို variable ကိုအဖြစ် objectifying ကြည့်နှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့မျက်စိခြေရာခံခြင်းဒေတာတူညီသောပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ objectifying ကြည့် [မျက်နှာများကိုကြည့်သုံးစွဲအချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှာဖွေနေသုံးစွဲသည့်ဆွေမျိုးအချိန်အဖြစ် operationalized ခဲ့သည်32] ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု (Aoi) ၏နှစ်ခုဒေသများ, ဦးခေါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားပါဝင်တဲ့အားလုံးကြွင်းသောအရာများတဦးတည်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ AOIs, ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျစုစုပေါငျး၌ကျိန်းဝပ်အချိန်, ပုံဖော်လူတစ်ဦးကြည့်ရှုခြုံငုံအချိန်, 100% အထိသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အောက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကြှနျုပျတို့ကိုယျခန်ဓာမှာညွှန်ကြားထားသောအခြိနျကာလ၏ရာခိုင်နှုန်းအာရုံစိုက်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးတန်ဖိုးများကိုအစဉ်အမြဲ 100% အထိ add ပြီးကတည်းကအကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအချိန်ကြည့်ရှုတစ်ခုတိုးလာအမြဲတမ်းမျက်နှာပေါ်မှာ၌ကျိန်းဝပ်အချိန်တစ်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း objectifying ကြည့်အတော်လေးရှည်မျက်နှာပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်နှင့်တိုတောင်းကြည့်ရှုအချိန်ပေါ်အချိန်ကြည့်ရှုဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကွန်ပျူတာက SPSS ဗားရှင်း 22 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်မျက်စိခြေရာခံခြင်း data တွေကိုလျှော့ချရေး BeGaze ၏စံ setting များကို အသုံးပြု. သဘောပေါက်ခဲ့သည် (linear ရောထွေးမော်ဒယ်ယေဘူယျ) ကို GENLINMIXED သုံးပြီးပြုမိခဲ့ကြTM (SMI, Teltow, ဂျာမနီ), ထိုကဲ့သို့သောကြာချိန် (အချိန် နေ. ) အဖြစ်ကြည့်သတင်းအချက်အလက်ပေး။
3.1 ။ သင်တန်းသားများကို
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်တန်းသားများမတိုင်မီက (ကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုအသံသွင်းဖို့ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်n = 5), Non-လိင်ကွဲ orientation ကို (n = 3), ဒါမှမဟုတ်ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးမှုများမှမလုံလောက်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် (n = လေးလွတ်လပ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် rated အဖြစ် 10) ။ တစ်ဦးက 58 သင်တန်းသားများစုစုပေါင်း (57% အမျိုးသမီး, M ကအသက်အရွယ် = 31.45, SD ကအသက်အရွယ် = 10.18) (ကိုတွေ့မြင် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကျန်ရစ် စားပွဲတင် 1). စားပွဲတင် 1 ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများကို '' AMMSA နှင့် OOS ရမှတ်၏နည်းလမ်းပြသထားတယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်နှစ်ခုလေ့လာမှုအုပ်စုများ၏ယုတ်တန်ဖိုးများကိုကွာခြားမအထူးအရေးကြီးပါသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ ပါဝင်သူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မေးခွန်းလွှာဒေတာ။
3.2 ။ ratings
သီးခြားမော်ဒယ်များသုံးခုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings, အမည်ရသရုပ်ဖော်လူတစ်ဦး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု, image ကိုအကြောင်းအရာရိပ်မိရငျးနှီးနှင့်ထပ်မံဖြန့်ဝေ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်အသီးအသီးအဘို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များကိုသာသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကဒီမှာအစီရင်ခံရသည်။
ဆွဲဆောင်မှု ratings, ကြှနျုပျတို့ Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူး vs. ကြည်ကြည် (ထိုအခွအေနေရှာတွေ့ဘဲ, ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 2) မဆိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်သို့သော်ကျား, မတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ပါဝင်သူကျားနှင့်ပုံရိပ်ကိုကျားမအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကွောငျးတှေ့ခဲ့ပေ။ အမြိုးသမီးမြား (M = 4.17, အရှေ့တောင် = 0.32 လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ယေဘုယျယောက်ျားကပိုဆွဲဆောင်မှု (M = 3.02, အရှေ့တောင် = 0.31) အဖြစ်ယောက်ျား၏အပုံရိပ်တွေ rated; t(924) = 3.25, p <0.001) ။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများ၏ပုံရိပ်များကိုအမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်များထက်ဆွဲဆောင်မှုနည်းသည်ဟုလည်းသတ်မှတ်ကြသည် (M = 4.46, SE = 0.32, t(924) = 9.36, p <0.001) ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားသက်ရောက်မှုအရေးပါမှုရောက်ရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု, နွေးထွေးမှုနှင့်ထပ်မံဖြန့်ဝေ၏ယူဆရမနှစ်မြို့ဖွယ်၏ ratings အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏နောက်ဆုံးနှစ်မော်ဒယ်များ။
အဆိုပါရငျးနှီး ratings ကိုရည်မှတ်ကျနော်တို့အခြေအနေနှင့်ကျားမအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ (p = 0.008 တွေ့ စားပွဲတင် 2) ။ Pairwise ထူးခွားသညျ့ Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးယူဆသောမိန်းမတို့ကိုကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူး (M = 4.86, အရှေ့တောင် = 0.25 ယူဆသောမိန်းမတို့ထက်ပိုရငျးနှီး (M = 4.56, အရှေ့တောင် = 0.26) အဖြစ်ပုံရိပ်တွေမှတ်ကြောင်းထင်ရှား; t(924) = 2.58, p = 0.01) ။
နောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူးသည့်သရုပ်ဖော်လူတစ်ဦးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ပုံကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း, ငါတို့ Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူး vs. ကြည်ကြည် (ထိုအခွအေနေတှေ့လြှငျ, p <0.001) (ကြည့်ပါ) အလွန်အမင်းသိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ် စားပွဲတင် 2) ။ Pairwise ထူးခွားသညျ့သင်တန်းသားများကိုကြည်ကြည်ခွဲဝေမှု (M = 4.63, အရှေ့တောင် = 0.28 ယူဆသူကိုသင်တန်းသားများထက်ပိုမနှစ်မြို့ဖွယ် (M = 4.26, အရှေ့တောင် = 0.28) အဖြစ် Non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှုအဖြစ်ယူဆထပ်မံဖြန့်ဖြူးယူဆကြောင်းထင်ရှား; t(924) = 3.74, p <.001) ။ ကျား၊ မနှင့်ကျားမရေးရာအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများထက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ပုံရိပ်များထပ်မံဖြန့်ဖြူးခြင်း၏မနှစ်မြို့ဖွယ် (M = 4.08, SE = 0.40) ကိုခန့်မှန်းကြသည် (M = 4.41, SE = 0.40; t(924) = 2.50, p = 0.013) ။ ထို့ပြင် AMMSA ရမှတ်, ကိန်း = -0.13 (အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိ p = 0.002), မြင့်သင်တန်းသားများသည် AMMSA-စကေးအပေါ်သူတို့ကပုံဖော်လူတစ်ဦးအဘို့အရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူးထည့်သွင်းစဉ်းစားနည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်သွင်းယူကြောင်းညွှန်ပြ။
3.3 ။ မျက်စိခြေရာကောက်သုံးသပ်ခြင်း
မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရှုသည့်ဆွေမျိုးအချိန်အဖြစ် operationalized အဆိုပါ objectifying ကြည့်, စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ (အခြေအနေနှင့်ကျား, မတစ်ဦးသိသိသာသာအပြန်အလှန်တွေ့ရှိခဲ့F(1,834) = 8.36, p <0.001) ။ သဘောဆန္ဒမတူသောအမျိုးသားများသည်အလောင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့် objectifying ကြည့်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည် (အဆိုပါကြည်ကြည်အခြေအနေ (က M = 54.37, အရှေ့တောင် = 8.99 အတွက်ယောက်ျားထက်က M = 46.52, အရှေ့တောင် = 9.01); t(834) = 4.25, p <0.001) (ကြည့်ပါ ပုံ 1) ။ non-ကြည်ကြည်ခွအေနအေအတွင်းမှာပဲယောက်ျားကိုလည်း objectifying အမျိုးသမီးတွေ (M = 49.53, အရှေ့တောင် = 8.97 လုပ်ခဲ့တယ်ထက်အလောင်းတွေကိုကြည့်ပိုပြီးအချိန်ဖြုန်း, အမျိုးသမီးများလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုပြီးကြည့်သရုပ်ပြ; t(834) = 3.07, p = 0.002) ။ အထူးသ, အကြည်ကြည်ခွအေနအေအတွင်းအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောကျားခြားနားချက် (ရှိခဲ့p > 0.05) ။
ပုံ 1 ။ အခြေအနေနှင့်ကျား, မအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သုံးစွဲ၌ကျိန်းဝပ်အချိန်အတောအတွင်းအချိုးအစား (နှင့်စံအမှား) ၏ခန့်မှန်းချက်။ *** p <0.001; ** p <0.01 ။
အဆိုပါ OOS ရမှတ်နှင့် AMMSA ရမှတ်၏ဆိုးကျိုးများ (သိသိသာသာခဲ့ကြသည်p <0.001), ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆွေမျိုးနေအချိန်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များအဘို့အတိုးကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်လိင်ဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္myာရီများကိုကန့်ကွက်။ လက်ခံရန်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်သဘောထားများအတွက် ပိုမို၍ သိသာထင်ရှားသည့် objectifying အကြည့်ကိုဖော်ပြသည်။ စားပွဲတင် 3).
စားပွဲတင်3။ ၌ကျိန်းဝပ်အချိန်အချိုးအစားအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings ဒါပေမယ့်လည်းသွယ်ဝိုက်ကြည့်အပြုအမူသာပုံရိပ်တွေ sexting များ၏ယူဆကြည်ကြည်သို့မဟုတ် Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
4.1 ။ image ကိုအကဲဖြတ်
တစ်ဦး sexting ပုံရိပ်၏ non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးယူဆသူကိုသင်တန်းသားများ, အမည်ရသရုပ်ဖော်လူတစ်ဦး၏အလိုတော်ဆန့်ကျင်ခွဲဝေမှုပိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ပုံရိပ်တွေ၏ထပ်မံဖြန့်ဖြူးသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ပုံအကြောင်းအရာသူ့ဟာသူသို့မဟုတ် sexting ဒါပေမယ့်လည်းပတျဝနျးကငျြသတင်းအချက်အလက်များထပ်မံရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူး၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေကိုမသာပြသသည်။ အထီးသင်တန်းသားများကိုပြုလေ၏ထက်စိတ်ဝင်စားစရာ, အမျိုးသမီးများယောက်ျား၏ပုံရိပ်များကိုအဘို့အနိမ့်ဖြန့်ဖြူး၏မနှစ်မြို့ဖွယ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သည်အခြားယောက်ျား၏ရုပ်ပုံများကိုမွငျလြှငျ, တစ်သားကောင်ဖြစ်လာနှင့် Non-ဆိုသည်ကိုအားလုံးသဘောတူညီ shared တဦးတည်းရဲ့ပုံရိပ်တွေရှိခြင်း၏အန္တရာယ် saliency မနှစ်မြို့ဖွယ်မြင့်မား ratings မှဦးဆောင်ယောက်ျားတို့အတွက်တိုးလာကြပါပြီပေလိမ့်မည်။ ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနှငျ့ပတျသကျသော Non-ကြည်ကြည် sexting ၏ဘုံဇာတ်လမ်းများမှအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုခွအေနအေ၏လွတ်လပ်သောသည့်အချိန်တွင်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ forwarding ကို၏အလားအလာအကျိုးဆက်များမိန်းမတို့အဘို့ပိုပြီးပြင်းထန်နေကြသည်အဖြစ် [43,44] အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားများအတွက်လျော့နည်းပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များလျော့နည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ထပ်မံ forwarding ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရုပ်ပုံရေးစပ်သီကွဲပြားအဖြစ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီလေ့လာမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မဖြစ်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံရိပ်တွေ၏သဘာဝဖန်တီးမှုကြောင့်ဖြစ်သော, လျော့နည်းလိင်အမျိုးသမီးတွေထက်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မနှစ်မြို့ဖွယ်၏ ratings သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားပိုမိုမြင့်မားယေဘုယျမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှုနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက်ထပ်မံဖြန့်ဝေ၏ရိပ်မိမနှစ်မြို့ဖွယ်၏အနိမ့် ratings မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများပိုမိုမြင့်မားထောက်ခံချက် [sexting အပေါ်ဘုံအန္တရာယ်ဟောပြောချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည့်အပြစ်တင်သားကောင်များ၏မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေများပြဖြစ်ပါသည်7,12,22,45] ။ ထို့ကြောင့် non-ကြည်ကြည် sexting အတွက်မွေးရာပါတစ်အန္တရာယ်မျှဝေစဉ်းစားထပ်မံဖြန့်ဝေ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်၏မျှော်မှန်းအဆငျ့အသေးအဖွဲခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါပုံဖော်လူတစ်ဦးနှင့်အတူစတင် image ကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှမိုသို့မဟုတ်မဆင်မခြင်ဖြစ်စေဘဲလျက်အဘို့တာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ သားကောင်တိုးအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေနှစ်မြို့ဖွယ်လျော့နည်းစေပါသည်။ ဒီပုံစံကိုလက်စားချေညစ်ညမ်း၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်သာပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည် [အလွန်အရေးပါသည်46] ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၏အခြားပုံစံများအဘို့ [26,47] နှင့်ပင် '' sexting abstinence '' လှုပ်ရှားမှုများသို့ယင်း၏လမ်းရှာတွေ့ထားပါတယ်  ။ ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ရိပ်မိရငျးနှီးရာမှာ, Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးယူဆအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေကြည်ကြည်ခွဲဝေမှုယူဆထက်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုရငျးနှီးအဖြစ်ပုံရိပ်တွေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လူတို့သညျ, သို့သော်, ယောက်ျား, မိန်းမဖြစ်စေ၏ပုံရိပ်များ၏ကြည်ကြည်သို့မဟုတ် Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ဒါက [အမျိုးသမီးများ၏ Non-ကြည်ကြည် sexting ၏သားကောင်များဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှစွပ်စွဲနိုင်3] နှင့်အွန်လိုင်းကျား-based အကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးပုံစံများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သားကောင်ခံရဖို့ [19,48] ။ အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအန္တရာယ်သတိထားဖြစ်ခြင်းအဆိုပါပုံဖော်လူတစ်ဦးနှင့် privacy ချိုးဖောက်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှအမျိုးသမီးများအားပိုပြီးအထိခိုက်မခံစေပါလိမ့်မယ်။
မျှော်လင့်ထားသည့်မတူဘဲ, ဖြန့်ဖြူးများ၏ assumed လမ်းသင်တန်းသားများကိုလိင်ဆွဲဆောင်မှု rated ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပါဘူး။ objectification နှင့်ဆွဲဆောင်မှု ratings ချိတ်ဆက်ယခင်သုတေသန [ပေါ့ပေါ့ wear နဲ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်တူညီတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးတွေပေးအပ်46] ။ ထိုသို့သောအားကြီးသောကိုင်တွယ်အခြေအနေများအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်အဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၌ပြစ်မှားမိအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက်တူညီတဲ့ Semi-ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေကိုသုံးပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆွဲဆောင်မှု ratings အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အလုံအလောက်ခြယ်လှယ်ကြပြီမဟုတ်ပေလိမ့်မည်။ လူတို့သညျအားဖြင့်ကျားမနှင့်ပုံရိပ်ကျားမအကြားပြအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အထီးပုံရိပ်တွေကိုပိုမိုတိကျစွာပိုမိုမြင့်မား ratings ကြောင့်ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်မဆက်စပ်အတွက်မွေးရာပါအချက်များဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤလေ့လာမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။
4.2 ။ အဆိုပါ Objectifying ကြည့်
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှာဖွေနေအချိန်ဆွေမျိုးငွေပမာဏအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ objectifying ကြည့်, အခြေအနေနှင့်ပါဝင်သူကျားကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးယူဆလူတို့သညျ objectifying ယောက်ျားမိမိဆန္ဒအလျောက်ခွဲဝေမှုယူဆထက်ပိုမိုနှင့်အမျိုးသမီးဖြန့်ဖြူး၏ထုံးစံဖြစ်စေယူဆထက်ပိုပြီးကြည့်ဖော်ပြပေး။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကြောင်းဖြန့်ဖြူးလွှမ်းမိုးမှု၏ထင်လမ်းကိုဘယ်လိုသင်တန်းသားများပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ objectifying ကြည့်ဖော်ပြရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ယခင်သုတေသန [အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေလိင်မီဒီယာ objectified ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု26,49,50] နှင့်လူ့ interaction ကနေစဉ်အတွင်း [51,52] ။ အဆိုပါ objectifying ကြည့်အနုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးအမြင်များ, လူဇာတ်ဖျက်ခြင်းနှင့် Self-objectification ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် [53,54,55] ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသွင်အပြင်-focus အနုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးအမြင်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်စဉ်တွင် [54,55] နှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ  ယောက်ျားအပေါ်အဘယ်သူမျှမနှိုင်းယှဉ်သုတေသနပြုတည်ရှိ။
အများအားဖြင့်အမျိုးသားတွေဆှေးနှေးခဲ့ပေမယ့်, အမျိုးသမီးများ [သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအမျိုးသမီးဆီသို့ကြောင့်သရုပ်ပြသော objectifying ကြည့်ဤမျှလောက် internalized ရှိသည်ဟုထင်နေကြသည်56] ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမှာ non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးယူဆမှသာလူတို့သညျဖျောပွထားသူတစ်ဦး၏ကျားမအားဖြင့်ထိခိုက်ဆိုသော်ငြား, အခြားပါဝင်သူအုပ်စုများထံမှကွဲပြားပါတယ်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများမတူဘဲ [57,58,59,60] ကျွန်တော်အပြုအမူကြည့်ရှုအပေါ်ပုံရိပ်ကိုကျား၏စနစ်တကျလွှမ်းမိုးမှုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ကျနော်တို့ [ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုင်တွယ်ဖြစ်နိုင်သည်ပုံရိပ်ကိုကျား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖုံးအုပ်အခမဲ့ကြည့်ရှုအခြေအနေများကနေမတူညီတဲ့ရှုပုံစံများအတွက်ရလဒ်အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်တောင်းဆိုချက်များကို evoked ကြအံ့သောငှါအကြံပြု61] ။ ယခင်သုတေသနနှင့်အညီ, အခြားသူများ objectify မှပိုမိုမြင့်မားယေဘုယျသဘောထားတွေအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္ဍာရီများပိုမိုမြင့်မားလက်ခံမှု [ပိုပြီးသိသာ objectifying ကြည့်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်35] ။ မြောက်မြားစွာကျား-တိကျတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အကျိုးဆက်များကို [ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ (မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှုများအတွက်အစီရင်ခံခဲ့ကြ62]) ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားဒီမှာလျှောက်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်စကေးနှင့် ပတ်သက်. ခေတ်သစ်ဒဏ္ဍာရီများ၏လက်ခံမှုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နေဆဲကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်မှ [ ပို. ပို. သိမ်မွေ့ဖြစ်လာကြပါပြီ63] ။ ဒီလေ့လာမှုကမျက်စိလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဘက်လိုက်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစဉ်းစားရန်ပထမဦးဆုံးသည်နှင့်သိမ်မွေ့သဘောထားတွေအမှန်ပင်အပြုအမူကြည့်ရှုထိခိုက်စေသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ဤရွေ့ကားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေနောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အခြေအနေတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
4.3 ။ ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်သုတေသန
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု [Non-ကြည်ကြည်ပုံရိပ်ကိုခွဲဝေမှုအများစုပြင်းထန်ကိစ္စများတွင်မတူပဲ Semi-ဝတ်လစ်စလစ်ရှိနသောသူငယျရှယျဆွဲဆောင်မှုလူကြီးများ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုကောင်းစွာပညာတတ်, လိင်ကွဲသင်တန်းသားများနှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကောက်ယူခဲ့သည်64] ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ၏ယေဘုယျထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ပါသည်။ အနာဂတ်သုတေသနကဤအချက်များ objectification များ၏အခြေအနေတွင်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သကဲ့သို့, အကောင့်သို့လမ်းဆုံလွှမ်းမိုးမှု (ဥပမာ, အရေပြားအရောင်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်) ယူထားပါတယ်  ။ သင်တန်းသားများကိုရည်မှတ် intersectionality [မျက်စိ-လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်လည်းအရေးကြီးပါတယ်65], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification  နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက် [67,68] တွေ့ပါပြီ။ အလောင်း (ဥပမာ, လူမှုရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ပို fixating သို့မဟုတ်မျက်နှာများကိုရှောင်ရှားအခြားအကြောင်းပြချက်များ (ဥပမာ, အရှက်ကွဲခြင်း) အဖြစ်ကောင်းစွာစူးစမ်းရပါမည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းပြချက်များအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုအာရုံစိုက်ပြီပထမဦးစွာလူကြီးများအကြားတွင် sexting ၏ပျံ့နှံ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားထက်အမှန်တကယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒုတိယအကျနော်တို့အသုံးပြုသူလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးပုံရိပ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ကြပေမယ့်နှစ်ခုညီမျှအုပ်စုများတစ်ခုစမ်းသပ်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကပြဆက်စပ်မှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားတည်ရှိနေမဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုပွားနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ဖြန့်ဖြူးများ၏ထင်ထုံးစံပုံရိပ်တွေ sexting ၏အမြင်ထိခိုက်စေသောသရုပ်ပြပေမယ့်, သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းအဘို့အ Non-ကြည်ကြည် sexting ၏စားသုံးသူတောင်းဆိုနေတာအရည်အသွေးသုတေသန (ပါဝါ၏ခံစားဥပမာ), နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူနောက်ကွယ်ကယုံကြည်ချက်သိရှိနိုင်ဖို့အရေးပါသောခြေလှမ်းနဲ့တူပုံရသည်  ။ နောက်ထပ်ရှုထောင့်အလှည့်အတွက် objectification လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်သည့် Non-ကြည်ကြည် forwarding ကိုကယုတ်လျော့စေခြင်းငှါ၎င်းပုံဖော်လူတစ်ဦး၏ရိပ်မိအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစိတ်ကူးထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ပါသည်။
နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification [ဘုံဖြစ်ပါသည်ကတည်းက70] ကဆန်းစစ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. သီအိုရီများနှင့်ထပ်မံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့် Non-ကြည်ကြည်ညစ်ညမ်း, ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပညာ-facilitated အကြမ်းဖက်မှုအကြားတူညီစူးစမ်းဖို့အလွန်အရေးပါသည်။
အဆိုပါနည်းပညာရှုခင်း၏လျင်မြန်သောအပြောင်းအလဲပုံမှန် [သူတို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ၏ဖန်တီးမှုအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အပေါ်ဥပမာ) တည်ဆဲသီအိုရီမှတိကျသောအမူအကျင့် (ဥပမာ, Non-ကြည်ကြည် sexting) ၏အသစ်အအမျိုးအစားများလင့်ထားသည်အဖြစ်46,71] ။ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ '' ၏ကောင်းစွာသုတေသနပြုသီအိုရီ [ပြင်းထန်တဲ့အထီးလိင်မှမိမိတို့ကိုကာကွယ်ဘို့မိန်းမတို့ကိုတာဝန်ယူကိုင်ပြီး, အမျိုးသမီးရဲ့လိင်မကြာခဏတက်ကြွဆန္ဒမှတဆင့်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြောင်းအကြံပြု72,73] ။ ဒါက [အွန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌သူတို့ကိုယ်သူတို့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းအနုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးအကျိုးဆက်များဒီလောက်စွန့်နေစဉ် sexy ဖြစ်ဖို့လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖိအားကြုံနေရအမျိုးသမီးများအတွက်ဝိရောဓိအနေအထားမှဦးဆောင်74,75] ။ လိင်နှစ်ဆစံစဉ်းစား [ကျွန်တော်တို့ကိုယောက်ျား၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အမြိုးသမီးမြားနေရာကြောင်းကျပုံစံကျားမအခန်းကဏ္ဍကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်အဖြစ် nonconsensual sexting နားလည်ရန်ခွင့်ပြု53,55] ။ မိန်းကလေးများလူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ပြချက်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု [ယောက်ျားလေးများထက်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်မှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်76], ကျားမရှုထောင့် [စဉ်းစားရန်လိုအပ်17,77] ။ ငြင်းခုံကဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့ (လူမှုရေး) မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု [အဖြစ် sexting စဉ်းစားရန်ကြပြီနေစဉ်78,79] နှင့် objectification ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတန်ပြန်ဖို့အမျိုးသမီးလုပ်ရပ်အဖြစ် sexy အသှငျအပွငျဘောင်မှ , ဒီအပြုသဘော reframing [တစ်ဦးချင်းစီ Self-ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုထင်ရှားသောစေခြင်းငှါအရာ, မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုပုံမှန်၏အလားအလာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသယ်ဆောင်71].
5 ။ နိဂုံး
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ပုံရိပ်တွေ sexting ၏ကြည့်ရှုအပြုအမူများနှင့်အကဲဖြတ်သူတို့ရဲ့ထင်ကြည်ကြည်သို့မဟုတ် Non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ objectification သီအိုရီနှင့်အညီတစ်ဦး '' objectifying ကြည့် '' သူတို့တစ်တွေပုံဖော်လူတစ်ဦး၏ကိုယ်မှာရှာနေတဲ့အတော်လေးကြာကြာအချိန်ကုန်ဆိုလိုတာက Non-ကြည်ကြည်ရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူးယူဆသူကိုယောက်ျားအတွက်ပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ 'objectifying ကြည့်' 'အခြားသူတွေ objectify မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ယေဘုယျသဘောထားတွေအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီလကျခံဖို့ပိုမိုမြင့်မားလိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက်လည်းပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အရှင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး abstinence sexting ၏အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပုံဖော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အားဤသို့သောရုပ်ပုံများကို non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးဘို့တာဝန် attribute ကြောင်းအကြံပြုမလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအစား, ကအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းအထီးစားသုံးသူအကြား, sexting ပုံရိပ်တွေ၏ non-ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးများ၏ illegitimacy အလေးပေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာကျောင်းကပညာရေးဖြစ်ရပ်များများ၏အခြေအနေတွင်ဥပမာ, လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သင့်လျော်တဲ့အများပြည်သူကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကင်ပိန်းအနည်းဆုံးသာဓကလည်းရှိသည်: http://notyourstoshare.scot/။ သာကဤသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူအများပြည်သူအရှက်နှင့်အွန်လိုင်းအနိုင်ကျင့်၏လေးနက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရေရှည်မှာတားဆီးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကူး, အေဒီ (အန်းနာ Dekker), အက်ဖ်ဒဗလျူနှင့် PB; နည်းစနစ်, အေဒီ (အန်းနာ Dekker), အက်ဖ်ဒဗလျူ; ဆော့ဖ်ဝဲ, မဟုတ်သက်ဆိုင်သော; တရားဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အက်ဖ်ဒဗလျူအေဒီ (အန်း Daubmann), hop; စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, အက်ဖ်ဒဗလျူ; အရင်းမြစ်များ, အေဒီ (အန်းနာ Dekker), PB; ဒေတာ Curation, အက်ဖ်ဒဗလျူ; အရေးအသား-မူရင်းမူကြမ်းပြင်ဆင်မှု, အေဒီ (အန်းနာ Dekker), အက်ဖ်ဒဗလျူ; အရေးအသား-ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တည်းဖြတ်, အေဒီ (အန်းနာ Dekker), အက်ဖ်ဒဗလျူ, PB; visualization, အက်ဖ်ဒဗလျူ; ကြီးကြပ်မှု, PB; စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, အေဒီ (အန်းနာ Dekker); ရန်ပုံငွေရှာမှီး, PB
ဒါဟာသုတေသန (Bundesministerium Bildung und Forschung, BMBF, 01SR1602 သားမွေး) ပညာရေးနှင့်သုတေသနဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Chalfen, R. "ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောရုပ်ပုံရဲ့": sexting, "smutty" ရိုက်ချက်နှင့်ပြစ်မှုစွဲချက်။ Vis ။ လုံး။ 2009, 24, 258-268 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Albury K ကို .; ခရော, K. sexting, သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့လူငယျရဲ့ကျင့်ဝတ်: Beyond Megan ရဲ့ပုံပြင်။ စဉ်ဆက် 2012, 26, 463-473 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Klettke, B, .; Hallford, DJ သမား; Mellor, DJ သမား sexting ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin ။ Psychol ။ ဗျာ 2014, 34, 44-53 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Strassberg, DS, McKinnon, RK; Sustaíta, MA; တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာရေးနှင့်ဖော်ပြချက်လေ့လာမှု: High School တွင်ကျောင်းသားများအားဖြင့် Rullo, ဂျေ sexting ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2013, 42, 15-21 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဗန် Ouytsel, ဂျေ .; Walrave, M က .; Ponnet K ကို .; ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် sexting, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူအကြား Heirman, ဒဗလျူအဆိုပါအသင်းမှ: Integrated ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ဂျေ SCH ။ သူနာပြု။ 2015, 31, 54-69 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Agustina, JR; ဂိုမက်ဇ-Durán, EL sexting: တစ် Global လူမှုရေးသဘာဝ၏သုတေသနလိုအပ်ချက်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2012, 41, 1325-1328 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Krieger, MA ဖွင့်နေသည် "sexting": Nonconsensual ဥပဒေရေးရာအတွက် sexting, ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ဓာတ်စာပေ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ စိတ်ဒဏ်ရာအကြမ်းဖက်မှုအလွဲသုံးမှု 2017, 18, 593-601 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Stokes, JK အဆိုပါမစင်ကြယ်သောအငျတာနကျ: ကလဲ့စား Porn ကိုတိုက်ဖျက်ဝရမ်းမဲ့အင်တာနက်ကအတော်လေးတွန်းလှန်ခြင်း။ ဘာကလေ Technol ။ ဥပဒေဂျေ 2014, 29, 929-952 ။ [Google Scholar]
Walker က, K သည် .; Sleath, လက်စားချေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ Non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိအသိပညာ၏အီးတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Aggressive ။ အကြမ်းဖက်ပြုမူနေ။ 2017, 36, 9-24 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Baumgartner, SE, Valkenburg, ညနေ; ပေတရုသည်ဂျေမလိုချင်တဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်နှင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအပြုအမူ။ ဂျေ Apple က။ dev ။ Psychol ။ 2010, 31, 439-447 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Citron, DK; လက်စားချေ porn Criminalizing Frank, MA ။ သစ်တောဥပဒေဗျာနိုး 2014, 49, 345-391 ။ [Google Scholar]
Döring, N. သဘောတူညီမှုမြီးကောင်ပေါက်အကြား sexting: အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး abstinence ပညာရေးသို့မဟုတ်ပိုလုံခြုံ sexting မှတဆင့်? Cyberpsychology 2014, 8,9။ [Google Scholar] [CrossRef]
Renfrow, DG, Rollo, EA ၏ sexting ကျောင်းဝင်းအပေါ်: ရိပ်မိအန္တရာယ်များကိုအသေးအဖွဲနှင့်အပြုအမူ neutralizing ။ Deviant ပြုမူနေ။ 2014, 35, 903-920 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Salter, M က .; လက်စားချေ porn ပြန်ကြားခြင်း Crofts, တီ: အွန်လိုင်းဥပဒေဆိုင်ရာအရေးမယူဖို့စိန်ခေါ်ချက်များ။ တွင် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ်နယူး Views: လိင်, နိုင်ငံရေးနှင့်ပညတ္တိကျမ်း; Comella, အယ်လ်, Tarrant, အက်စ်, Eds .; Praeger ထုတ်ဝေ: စန်တာဘာဘရာ,, CA, USA, 2015; စစ။ 233-256 ။ [Google Scholar]
အဆိုပါအွန်လိုင်းကိုယ်ပိုင်များ၏အမှောင်ဘေးထွက် SR Stroud: ကလဲ့စား Porn ၏ကြီးထွားလာဘေးတစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ Critique သည်။ ဂျေ Mass Media ကိုကျင့်ဝတ် 2014, 29, 168-183 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဗိမာနျတျော, JR; le, VD; ဗန်တွင်း Berg က, P ကို ​​.; လိန်း, Y ကို .; ပေါလုသည်ဂျေအေ; ဗိမာနျတျော, BW အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ: ဆယ်ကျော်သက် sexting နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ 2014, 37, 33-36 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
dir, AL; Coskunpinar, တစ်ဦးက .; Steiner, JL; Cyders, MA နားလည်မှုကျား, ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတစ်ဖက်မှာ sexting အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များနှင့် sexting အတွက်မျှော်လင့်ထား၏အခန်းက္ပ။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2013, 16, 568-574 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ချန်ပီယံ, AR; သဘောထားတွေ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် sexters နှင့် Non-sexters အကြားကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး Pedersen, CL ။ နိုင်သလား။ ဂျေ Hum ။ လိင်။ 2015, 24, 205-214 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Rentschler, C. #Safetytipsforladies: နှိပ်စက်ခံရသူ၏ Feminist တွစ်တာအရေးယူခြင်းအပြစ်တင်။ Fem ။ မီဒီယာလုံး။ 2015, 15, 353-356 ။ [Google Scholar]
ဟင်နရီ, N ကို .; ဝဲလ်သည် "sexting" အပြင်အေ: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေဆန့်ကျင်နည်းပညာ-facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်။ Aust ။ NZJ Criminol ။ 2015, 48, 104-118 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ခန်းမ, R. "ဒါဟာသင်သည်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်": အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အသက်အရွယ်အတွက်မုဒိမ်းကာကွယ်တားဆီးရေး။ Hypatia 2004, 19, 1-18 ။ [Google Scholar]
Rentschler,, CA မုဒိမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ၏အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေး။ Girlhood လုံး။ 2014, 7, 65-82 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Fraser, "Ladies ပထမဦးစွာ" မှသည် "ဒါဟာအဘို့အမေး" ကို C. : မုဒိမ်းယဉ်ကျေးမှုကို Maintenance အတွက်အကျိုးပြု Sexism ။ ကာလီဖိုးနီးယား။ ဥပဒေဗျာ 2015, 103, 141-204 ။ [Google Scholar]
Brownmiller, S. အမျိုးသမီးများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု, ငါတို့အလိုတော်ဆန့်ကျင်; ရှိမုန်နှင့် Schuster: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 1975 ။ [Google Scholar]
Burt, မုဒိမ်းမှုအတှကျအ MR ယဉ်ကျေးမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်အထောက်အပံ့များ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 1980, 38, 217-230 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Vance K ကို .; Sutter, M က .; Perrin, PB; Heesacker, အမျိုးသမီး, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့် Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုအမ်အဆိုပါမီဒီယာရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification ။ ဂျေမှထုတ်ပြန်သော။ မတရားသဖွငျ့။ ဒဏ်ရာ 2015, 24, 569-587 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Lonsway, ka; Fitzgerald, မုဒိမ်းဒဏ္ဍာရီ LF: ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 1994, 18, 133-164 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Szymanski, DM; Moffitt, LB; Carr က, အမြိုးသမီးမြား၏ ER လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification: သီအိုရီနှင့်သုတေသနကြိုတင်။ Couns ။ Psychol ။ 2011, 39, 6-38 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Fredrickson, BL, ရောဘတ်, T.-A. Objectification သီအိုရီ။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 1997, 21, 173-206 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Moradi, B, .; Huang က, Y.-P. အမျိုးသမီးများ၏ Objectification သီအိုရီများနှင့်စိတ်ပညာ: တိုးတက်လာနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်တစ်ဆယ်စုနှစ်။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 2008, 32, 377-398 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bartky, SL ဣတ္နှင့်ကြီးစိုး: ဖိနှိပျ၏ Phenomenology လေ့လာစရာများ; စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 1990 ။ [Google Scholar]
Gervais, SJ; ဟော်လန်, Am, Dodd, MD, ငါ့မျက်လုံး Up ကို are here: အမျိုးသမီးများနေ့ခါနီးအဆိုပါ Objectifying ကြည့်၏သဘာဝတရား။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2013, 69, 557-570 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bohner, G. အ Vergewaltigungsmythen [မုဒိမ်းဒဏ္ဍာရီ]; Verlag Empirische Pädagogik: Landau, ဂျာမနီ, 1998 ။ [Google Scholar]
Eyssel, F ကို .; Bohner, အပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းအပေါ်မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံ၏ G. အစီမံချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုများအတွက်အပြစ်တင်: တရားသူကြီးမှခံစားခွင့်အတွက်ခံစားခွင့်၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ interp ။ အကြမ်းဖက်မှု 2011, 26, 1579-1605 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Süssenbach, P ကို ​​.; Bohner, G .; အမြင်အာရုံသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်မုဒိမ်းကျင့်ဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှု၏ Eyssel, အက်ဖ်သိထားလွှမ်းမိုးမှု: တစ်ခုကမျက်စိခြေရာခံချဉ်းကပ်။ ဂျေ Exp ။ Soc ။ Psychol ။ 2012, 48, 660-668 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Süssenbach, P ကို ​​.; Eyssel, F ကို .; Rees, ဂျေ .; နှိပ်စက်ခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှအပြစ်တင်မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရှာဖွေနေ Bohner, G. အ။ ဂျေ interp ။ အကြမ်းဖက်မှု 2017, 32, 2323-2344 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Rollero, C ကို .; Tartaglia, အက်စ်ကျပုံစံအမြင်နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ဆွဲဆောင်မှုအပေါ် objectification ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psihologija 2016, 49, 231-243 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Perkins, AB, Becker က, ဖက်စပ်; Tehee, M က .; Mackelprang, ကောလိပ်ကျောင်းသားများအနက်အီး sexting အပြုအမူ: Concern ဘို့အကြောင်း? int ။ ဂျေလိင်။ ကျန်းမာရေး 2014, 26, 79-92 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Noll, SM; Fredrickson, Self-objectification ချိတ်ဆက် BL အာမခံမော်ဒယ်ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်, disorders စား။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 1998, 22, 623-636 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Strelan, P ကို ​​.; Hargreaves, ဃအမျိုးသမီးများနေ့ကိုအဘယ်သူ Objectify အခြားအမျိုးသမီးများ: Objectification ၏ဆိုးစက်ဝိုင်း? လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2005, 52, 707-712 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Gerger, H ကို .; Kley, H ကို .; Bohner, G .; Siebler, အက်ဖ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်စကေးနှင့် ပတ်သက်. ခေတ်သစ်ဒဏ္ဍာရီများ၏လက်ခံမှု: ဂျာမန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် validation ကို။ Aggressive ။ ပြုမူနေ။ 2007, 33, 422-440 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kleinbaum, DG, Klein, အမ် Logistic Regression; Springer: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2010 ။ [Google Scholar]
Draper, NRA အန္တရာယ်မှာသင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်လား? ယူနိုက်တက်စတိတ်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းများတွင်ဆယ်ကျော်သက် sexting ၏သုတ်။ ဂျေကလေး။ မီဒီယာ 2012, 6, 221-236 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Ringrose, ဂျေ .; Harvey, L ကို .; Gill, R ကို .; Livingstone, အက်စ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် "sexting": ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ကိုလဲလှယ်အတွက်ကျားမတန်ဖိုး။ Fem ။ သဘောတရား 2013, 14, 305-323 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဟင်နရီ, N ကို .; Powell, အေနည်းပညာ-facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: ကိုလက်တွေ့သုတေသနတစ်ဦးကစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စိတ်ဒဏ်ရာအကြမ်းဖက်မှုအလွဲသုံးမှု 2018, 19, 195-208 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဘိတ်, အက်စ်ကလဲ့စား Porn နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။ အမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ခဲ့သူများအပေါ်ကလဲ့စား Porn ၏စိတ်ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးကအရည်အသွေးအားသုံးသပ်ခြင်း။ Fem ။ Criminol ။ 2017, 12, 22-42 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Gill, R. မီဒီယာ, လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများသည် "ယဉ်ကျေးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ" ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012, 66, 736-745 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
အင်္ဂလန်, အီးဆယ်ကျော်သက်လေးတွေများထဲတွင် sexting နှင့်ကလဲ့စား Porn အတင်းအကျပ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကျူးကျော် Bullying ။ Soc ။ မီဒီယာ 2015, 1, 19-21 ။ [Google Scholar]
Rohlinger, DA ကာမလူတို့သညျ: ကြော်ငြာနှင့်အထီး objectification အပေါ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2002, 46, 61-74 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရပ်ကွက်, LM မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 ။ ဂျေလိင် Res ။ 2016, 53, 560-577 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Davidson, MM; Gervais, SJ; Canivez, GL; ကိုးလ်, ကောလိပ်လူတို့တွင် Interpersonal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification စကေး၏ကို BP တစ်ဦးက psychometric စာမေးပွဲ။ ဂျေ Couns ။ Psychol ။ 2013, 60, 239-250 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Engeln-Maddox, R ကို .; Miller က SA; ဒို, Objectification ဂေးအတွက်သီအိုရီ, လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံနှင့်လိင်ကွဲအဝန်းနမူနာ၏ DM စမ်းသပ်မှု: အဆိုပြုထား Pathways များအတွက်ရောနှောထားသောအထောက်အထား။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2011, 65, 518-532 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဘားနတ်, P ကို ​​.; Loughnan, S ကို .; Marchal, C ကို .; Godart, တစ်ဦးက .; Klein, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification ၏ O. အဆိုပါ Exonerating Effect: လိင် Objectification အဓမ္မပြုကျင့်သည်တပါးအမျိုးသားမုဒိမ်းဆက်စပ်အတွက်အပြစ်တင်လျော့နည်းစေပါသည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2015, 72, 499-508 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Gervais, SJ; ဘားနတ်, P ကို ​​.; Klein, အို .; Objectification နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေတဲ့ညျ့ဝသီအိုရီခါနီး Allen က, ဂျေ။ တွင် Motivation အပေါ် 60th Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ: Objectification နှင့် (De) လူ့; Gervais, SJ, Ed က .; Springer: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2013; စစ။ 1-23 ။ [Google Scholar]
Heflick, NA; Goldenberg, JL; Cooper က, DP; Puvia, အမျိုးသမီးများ မှစ. တ္ထုမှအီး: ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အာရုံ, ပစ်မှတ်ကျားနှင့်နွေးထွေးမှု, စာရိတ္တနှင့်အရည်အချင်းကို၏သဘောထားအမြင်။ ဂျေ Exp ။ Soc ။ Psychol ။ 2011, 47, 572-581 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Puvia, E ကို .; Vaes, ဂျေတစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်း: အမျိုးသမီးများနေ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန် Related ကိုယ်ပိုင် Views စာနှင့်လိင် Objectified အမျိုးသမီးပစ်မှတ်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2013, 68, 484-495 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ခန်းမ, C ကို .; Hogue, T က .; Guo, လိင်ပိုမိုနှစ်သက်နှင့် Non-preferences လူ့ကိန်းဂဏန်းများဆီသို့ဦးတည် K. Differential ကြည့်အပြုအမူ။ ဂျေလိင် Res ။ 2011, 48, 461-469 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hewig, ဂျေ .; Trippe, RH အ; Hecht, H ကို .; Straube, T က .; Miltner, Specific ခန္ဓာကိုယ်နေရာများများအတွက် WHR ကျားကွာခြားချက်များအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးမှာလိုက်ရှာတဲ့အခါ။ ဂျေ Nonverbal ပြုမူနေ။ 2008, 32, 67-78 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Lykins, အေဒီ; Meana, M က .; Strauss, ခေါ်ဆောင်သွားနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှ Visual အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်မိသားစုဆရာဝန်လိင်ကွာခြားချက်များ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2008, 37, 219-228 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Nummenmaa, L ကို .; Hietanen, JK; Santtila, P ကို ​​.; မျက်နှာနှင့်အဖွဲ့များကိုကြည့်ရှုခြင်းနေချိန်မှာ Hyona, ဂျေကျားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းမျက်လုံးလှုပျရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2012, 41, 1439-1451 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Bolmont, M က .; Cacioppo, JT; Cacioppo, အက်စ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အကြည့်ထဲမှာ Is: မေတ္တာနှင့်လိင် Desire ၏မျက်လုံးခြေရာခံလေ့လာပါ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 2014, 25, 1748-1756 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bohner, G .; Eyssel, F ကို .; Pina, တစ်ဦးက .; Siebler, F ကို .; Viki, GT ကိုမုဒိမ်းဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှု: သိမှု, ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သားကောင်အပြစ်တင်နှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ exonerate ကြောင်းယုံကြည်ချက်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ တွင် မုဒိမ်းမှု: ခေတ်ပြိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့; Horvath, အမ်, ဘရောင်း, JM, Eds .; Willan ထုတ်ဝေရေး: Cullompton, ဗြိတိန်, 2009; စစ။ 17-45 ။ [Google Scholar]
ရေကူး, JK; Aikin, KJ; ခန်းမ, WS; မုဆိုး, BA ဘွဲ့ Sexism နှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု: ခေတ်အဘိဓါန် Old နှင့်ခေတ်သစ်စွဲ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 1995, 68, 199-214 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Salter, အမ်တရားမျှတရေးနှင့်အွန်လိုင်းတန်ပြန်-public အတွက်လက်စားချေ: ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏အသက်အရွယ်အတွင်းလိင်အကြမ်းဖက်မှုမှလွန်မြောက်တုံ့ပြန်မှု။ ရာဇဝတ်မှုမီဒီယာသတ်ဖို့။ 2013, 9, 225-242 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Blais, C ကို .; ဂျက်, RE; Scheepers, C ကို .; Fiset, D ကို .; Caldara, R. ယဉ်ကျေးမှုကျနော်တို့မျက်နှာကိုမကြည့်ပါကဘယ်လိုပုံစံသွင်းသွင်း။ PLoS ONE 2008, 3, e3022 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Loughnan, S ကို .; ဖာနန်ဒက်ဇ-Campos, S ကို .; Vaes, ဂျေ .; Anjum, G .; Aziz က, M က .; Harada, C ကို .; ဟော်လန်, E ကို .; Singh က, ငါသည် .; Purvia, E ကို .; တစ်ဦးကလူမျိုးခုနစ်လေ့လာမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အတွက်ယဉ်ကျေးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို Exploring Tsuchiya, K. ။ Revue Internationale က de စိတ်ပညာလူမှုရေး 2015, 28, 125-152 ။ [Google Scholar]
Buchanan, NT, Ormerod, AJ အာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများဘဝအသက်တာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက် Racialized ။ အမျိုးသမီးများနေ့ Ther ။ 2002, 25, 107-124 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ho, Ik; Dinh, KT; Bellefontaine, SA; Irving, အာရှနှင့်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အကြား AL လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလက္ခဏာများ။ ဂျေမှထုတ်ပြန်သော။ မတရားသဖွငျ့။ ဒဏ်ရာ 2012, 21, 95-113 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Lee က M ကို .; Crofts, T. ကျား, ဖိအား, အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့: Untangling တွန်းအားလူငယ်များအကြား sexting သည်။ br ။ ဂျေ Criminol ။ 2015, 55, 454-473 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Capodilupo, CM; Nadal, KL; Corman, L ကို .; Hamit, S ကို .; လီယွန်, OB; Weinberg, ကျား, မ microaggressions ၏အေဒီပေါ်ထွန်းခြင်း။ တွင် Microaggressions နှင့် margin: manifest, Dynamics ကိုနှင့်သက်ရောက်မှု; Wing Sue, D. , Ed က။ ; John Wiley & Sons: Somerset, NJ, USA, 2010; စစ။ 193-216 ။ [Google Scholar]
Papp, LJ; Erchull, MJ Objectification နှင့်စနစ်မျှတမှုသက်ရောက်မှုမုဒိမ်းရှောင်ရှားအပြုအမူ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2017, 76, 110-120 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Tolman, DL အမျိုးသမီးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, လိင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် Desire: ကျားမမညီမျှမှုများ၏တစ်ဦးကပျောက်ဆုံးသုတျ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012, 66, 746-757 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Egan, RD လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာခြင်း: မိန်းကလေးများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏တစ်ဦးကဝေဖန်အကဲဖြတ်; Polity စာနယ်ဇင်း: ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်, 2013 ။ [Google Scholar]
Daniels, EA ၏, Zurbriggen, EL sexy များ၏စျေးနှုန်း: nonsexualized Facebook ကိုပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ကြည့်ရှုသူများသည် '' သညာ။ Psychol ။ ပေါ့ပ်။ မီဒီယာသတ်ဖို့။ 2016, 5, 2-14 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Manago, Am, ဂရေဟမ်, ကို MB; Greenfield, ညနေ; Salimkhan, MySpace ပေါ်တွင် G. အကိုယ်ပိုင်တင်ဆက်မှုများနှင့်ကျား, မ။ ဂျေ Apple က။ dev ။ Psychol ။ 2008, 29, 446-458 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Seidman, G .; Miller က Facebook ကို Profiles မှ Visual အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်ကျားနှင့်ကာယကိုဆွဲဆောင်၏ OS ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw 2013, 16, 20-24 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ခန်းမ, CL; Hogue, T က .; Guo, လူ့ကိန်းဂဏန်းများမှမဟာဗျူဟာကိုကြည့်ရှုခြင်း K. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုလမ်းညွှန်များ။ ဂျေလိင် Res ။ 2014, 51, 184-196 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Chalfen, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူမှုဆက်သွယ်ရေးအဖြစ် Sexting R. Commentary ။ ဂျေကလေး။ မီဒီယာ 2010, 4, 350-354 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hasinoff, AA ကို sexting မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်: Rethinking လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်လိင်။ နယူး။ မီဒီယာ Soc ။ 2013, 15, 449-465 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Lerum K ကို .; Dworkin, SL "ဆိုးမိန်းကလေးများနည်းဥပဒေ": မိန်းကလေးများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယား Task Force ၏အစီရင်ခံစာအပေါ်တစ်ဦး Interdisciplinary Feminist Commentary ။ ဂျေလိင် Res ။ 2009, 46, 250-263 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]